DOWNLOAD Tupolev tu-144 zuru ezu ngwugwu 2.0 FS2004 - Rikoooo
Tupolev tu-144 zuru ezu ngwugwu 2.0 FS2004 -ekpo ọkụ
downloads 15 568
Nke a bụ otu n’ime ole na ole add-on maka FS2004 ebe simulation na-agbanye! Anyị ga na-enwe obi ụtọ maka ọkwa a nke mma, yana ogwe aka niile na-ejikwa bọtịnụ obere anyị ga ịmụta site n'ịgụ akwụkwọ ntuziaka.
The Tupolev Tu-144 (NATO akuko aha: "chaja '") bụ otu n'ime ụwa abụọ supersonic iga ugbo elu (SST) ịbanye abụghị ọrụ agha, tinyere ndị Concorde, na e wuru n'okpuru nduzi nke ndị Soviet Tupolev imewe Bureau gawa site Alexei Tupolev.
The Tu-144 bụ n'elu ahụ yiri ihe Aérospatiale / British Aircraft Corporation Concorde, n'okpuru mmepe n'otu oge, ma e nwere ugboro ugboro boro na Soviet ịbụ ndị nledo keere òkè bụ isi, na-enye ndị Tu-144 na aha otutu "Konkordski" ma ọ bụ "Concordski" . The Tu-144 bụ Tupolev nanị supersonic azụmahịa airliner ịmalite, dị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ nnukwu supersonic ugbo elu e mere na wuru ka agha nkọwa. All ndị a ugbo elu uru site ọrụaka ma na nkà mmụta sayensị ọsọ ọsọ si TsAGI, ndị Central Aerohydrodynamic Institute. McDonnell Douglas, Lockheed na Boeing ndị atọ ndị ọzọ Nsukka nwara chepụta SST airliners maka US ahịa n'oge 1960s, ma o nweghị isi.
A prototype (OKB: izdeliye 044 - isiokwu 044 mbụ ama on 31 December 1968 nso Moscow, ọnwa abụọ ka Concorde. The Tu-144 mbụ mebiri ọsọ nke ụda on 5 June 1969, na on 15 July 1969 akabade edi akpa azụmahịa iga gafere Mach abụọ. The Tu-144 ẹkenam n'ime njem ọrụ on 1 November 1977, ọ fọrọ nke nta afọ abụọ mgbe Concorde, ma e n'oge na-adịghị napụrụ mgbe naanị 55 ndokwa njem flights ruru ka nwere oké nsogbu na ugbo elu na nchekwa na e ndin im ẹkenam ọrụ.
Ọ bụ ezie na Tu-144 bụ nyochawa agụnye a pụrụ iji tụnyere Concorde, kọrọ ya a njem ahịa n'ime Soviet Union na ọrụ ahụ kwụsịrị mgbe nanị 102 ndokwa flights (55 njem flights, na ike ibu). The Concorde nọgidere na ọrụ ruo mgbe 2003, a na-napụrụ afọ atọ mgbe ndị okuku nke Air France Flight 4590 nso Paris on 25 July 2000, nanị ọnwụ nke ihe SST na-abụghị ọrụ agha.
Ndị Soviet bipụtara echiche nke ndị Tu-144 na isiokwu dị na January 1962 nke nke magazin Technology nke Air Transport. The ikuku ozi malitere mmepe nke Tu-144 on 26 July 1963, esonụ ihu ọma site Council nke Ozi 10 ụbọchị mbụ. The oru ngo malitere afọ abụọ mgbe e mesịrị ka Concorde. The atụmatụ kpọ ise efe efe prototypes na-ọkọbọpde ke afọ anọ. The mbụ ugbo elu bụ ịdị njikere na 1966.
N'agbanyeghị nso myirịta na ọdịdị nke Tu-144 ka Briten na French supersonic ugbo elu, e nwere ịrịba iche dị na akara, navigation na engine usoro. Na ebe dị ka nso, aerodynamic sophistication, braking na engine achịkwa, ihe Tu-144 lagged n'azụ Concorde. Ọ bụ ezie na Concorde tinye n'ọrụ otu kọmputa engine akara ngwugwu si Lucas, Tupolev e kweghị ka ịzụta ya maka Tu-144 dị ka ọ pụrụ nwekwara ike-eji on agha ugbo elu. The Concorde si emepụta na-eji mmanụ ụgbọala nke a airliner dị ka coolant maka ntụ oyi na ụlọ na ndị haịdrọlik usoro (lee Concorde # Heating okwu maka nkọwa). Tupolev arụnyere ọzọ akụrụngwa na Tu-144 imezu nke a, na-amatawanyezi arọ nke airliner.
Tupolev wee na-arụ ọrụ iji melite Tu-144. Ọtụtụ ọkpụrụkpụ upgrades na E mere mgbanwe ndị na Tu-144 prototype (Oghere Usoro ọgụgụ 68001). Mgbe ha abụọ na Concorde na Tu-144 prototype ama ogival Delta nku, na Tu-144 si nku enweghị Concorde si conical camber. Production Tu-144s dochie a nku na a abụọ-Delta nku gụnyere conical camber, ha kwukwara ihe mmezi mfe ma bara uru ngwaọrụ: abụọ obere retractable canard ebupụta otu on ma akụkụ nke na-atụ ngalaba na ugbo elu na-amụba inwego na ala na-agba.
Akpụ akpụ na elevons n'ala na a Delta-nku ugbo elu-enwekwu ndị inwego, kama ka pitches ya imi ala. The canard akagbu a imi-ala oge, si otú mbenata ọdịda ọsọ nke mmepụta Tu-144s ka 315-333 km / h (170-180 kn, 196-207 mph) - Otú ọ dị, ka ngwa ngwa karịa na nke Concorde. The NASA ọmụmụ depụtara ikpeazụ obibia ọsọ n'oge rụrụ Tu-144LL ule flights ka 170 ka 181 mara akpụ (315 ka 335 km / h) Otú ọ dị ndị a na obibia gbapụrụ ọsọ gosipụtara n'oge ule flights kpọmkwem bu n'obi na-amụ ọdịda mmetụta na kacha ekwe omume nso nke gbapụrụ ọsọ, n'agbanyeghị otú ike na ike ọdịda nwere ike ịbụ. Dị ka mgbe landings, FAA okirikiri anatara Tu-144S obibia ọsọ dị ka 178 mara akpụ (330 km / h), dị ka megide BAC / Aerospatiale Concord (e) obibia ọsọ nke 162 mara akpụ (300 km / h), dabere doro anya na e ji mara kwuru site emepụta na Western usoro iwu ozu. Otú ọ dị, ọ na-, arụmụka otú mụ bụ Tu-144S na depụtara airspeed. Nke kasị mkpa, mgbe NASA subcontracted Tupolev Bureau na 1990s iji tọghata otu n'ime ndị fọdụrụ Tu-144D ka a Tu-144LL ọkọlọtọ, ihe ruuru site Tupolev maka ọdịda kọwara Tu-144LL "ikpeazụ obibia ọsọ ... na iji nke 360 km / Ọrụ Nchịkwa Mmadụ dabere na mmanụ ụgbọala dị arọ. " Brian Calvert, ndị Concorde si ọrụaka ụgbọ elu njikwa na-agafebeghị azụmahịa pilot ekpede ọtụtụ inaugural flights, kwuru ihe ikpeazụ obibia ọsọ nke a typical Concorde ọdịda na-155 ka 160 mara akpụ, ie 287 ka 296 km / h. Lower Concorde ọdịda ọsọ tụnyere Tu-144 bụ n'ihi na Concorde si ọzọ a nụchara anụcha imewe nke nku profaịlụ na-enye elu inwego na ala gbapụrụ ọsọ na-enweghị eweda supersonic ụgbọ arụmọrụ - a mma-emekarị kwuru na Western akwụkwọ na Concorde na kwetara site Tupolev ndị na-emepụta dị ka ọma. (Source Wikipedia)
Onye edemede: Thomas Ruth, Claudio Mussner
Tupolev tu-144 zuru ezu ngwugwu 2.0 FS2004